Maamulka Jubaland oo ka hadlay Xaaladaha Amaan ee magaalada Qorshayaalna soo bandhigay – SBC
Maamulka Jubaland oo ka hadlay Xaaladaha Amaan ee magaalada Qorshayaalna soo bandhigay
Posted by Webmaster on July 17, 2013 Comments
Mudooyinkii ugu dambeeyay Waxa ku soo badanayay magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubada hoose kooxo xiran dresska ciidanka Dowlada oo dadka magaalada ay ka muujiyeen cabashooyin kala duwan.
Waxay kooxahaasi dhac iyo handadaad u geysteen dadweynaha qaar ee ku dhaqan xaafadaha magaaladaas waxaana arintaasi soo ka hadlay madaxda sar sare ee maamulka Jubaland siiba madaxweyne ku xigeenka maamulkaas Mudane C/laahi Ismaaciil Fartaag.
Waxa uu Madaxweyne ku xigeen fartaag sheegay in ay dejiyeen qoryashaal ay kaga hortagayaan kooxahaas ayna u sheegayaan shacabka reer Kismaayo in ay isdejiyaan.
Mr Fartaag ayaa sheegay In qoryashaaya ugu horeeya ee amaanka lagu xasilinayo uu noqon doono in ciidamada dowlada Jubaland ee kismaayo kusugan dib loogu celiyo xarumahooda gaar ka ah.
“Falalkaas cabashadooda way nasoo gaartay maalmihi ugu dambeeyay, waxaa geystay rag aan ciidanka ka tirsaneyn oo dresska meelahaas ka helay, lakin fara kulul ayan ku qabaneynaa, waxaan dejinay qorshayaal ciidanka loogu xareynayo ciidamada Jubaland” sidaasi waxaa yiri Madaxweyne ku xigeenka Maamulka Jubaland.
Waxa uu intaasi ku daray Madaxweyne Fartaag in Ciidamada ay ogaadeen falalka ay kooxahaasi geysanayaan balse loo maarahayo kooxahaas farakulullna lagu qaban doono marka ciidanka la xareeyo.
Sikastaba ha ahaatee waxa ka bilawday magaalada Kismaayo howlagada maamulkaas uu ku sugayo amaanka iyadoo ay saaka soconayeen howlgalo ay ka wada qeyb qaadanayeen ciidamada Amisom iyo kuwa Jubaland kuwaas oo isugu jiray miino saaris iyo kuwo dadka laga shakiyo lagu qabqabanayay.